FREE TIMES: သစ်ပင် နှင့် သူ၏ ဘယ်လက်ထဲက ပုံပြင်
သစ်ပင် နှင့် သူ၏ ဘယ်လက်ထဲက ပုံပြင်
တစ်ခါက သစ်ပင်တစ်ပင်ကြီးရှိတယ် ။ ပင်စည်ကောင်းကောင်း အမြစ်ကောင်းကောင်း အကိုင်းအခက်တွေဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ အသီးတွေကလဲ ရှိနေပြန်တယ် ။ တကယ်ကို အုံ့အုံ့ ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ သစ်ပင်ကောင်းကောင်းကြီးတစ်ပင်ပေါ့ ။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့သူတွေကတစ်ခါတစ်လေ ဖြတ်သွားဖြတ်လာရင်းနဲ့ အရိပ်ကောင်းလှတယ့် ဒီသစ်ပင်ကြီးအောက်မှာ ခဏတစ်ဖြုတ်နားခိုချင်ကြတယ် ။ တစ်ချို့ကြတော့ သစ်ပင်ကြီးအောက်မှာ ၀ိုင်းဖွဲ့ကာ စကားစမြည်ပြောချင်ကြတယ် ။ တစ်ချို့ကတော့ အရိပ်နေနေအခက်ချိုးချိုး လုပ်ချင်ကြတာပေါ့ ။ နောက်ပြီးကလေးတွေကလဲ ဆော့ကစားချင်ကြသေးတယ် ။ အားလုံးကဒီသစ်ပင်ကြီးကို သူတို့ဆန္ဒအတိုင်းပြုလုပ်ချင်ကြတယ် ။
လက်မခံတာမှ လုံးဝကိုခါးခါးသီးသီးပဲ…။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမှာ ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်တစ်ခုရှိနေတယ်..။
အဲဒါက ဖြတ်သွားဖြတ်လာ နားခိုသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် စကားစမြည်ပြောဆိုသူတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်တန်ရင် သူအရိပ်အောက်က ထွက်ခွားသွားကြမယ်ဆိုတာ သူယုံကြည်နေတယ် ။ အရိပ်နေနေအခက်ချိုးချိုး သူတွေဆိုပိုဆိုးတာပေါ့ ။
“ သူအရိပ်အောက်မှာ တသက်လုံးနေနိုင်မယ့်သူကိုသာ သူအရိပ်ထဲ ၀င်ခွင့်ပေးမယ် ”
အဲဒီစည်းမျဉ်းက သစ်ပင်ကြီးကို လူတွေနဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်း ဝေးကွာသွားစေတော့တယ် ။ မနေနိုင်တဲ့သူတွေက အနားကိုမကပ်ကြတော့ဘူး ။ တစ်ချို့တစ်လေကျတော့လဲ အရဲစွန့်ပြီး ခွင့်တောင်းကြတယ် ။
ဒါပေမယ့်သစ်ပင်ကြီးက နိုး ဆို နိုး ပဲ..။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေ ကြာလာတော့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာမရှိတဲ့ သစ်ပင်ကြီးက ခြောက်ကပ်ကပ်ဖြစ်လာတဲ့အပြင် သူ့အမှိုက်တွေနဲ့ သူ ရှုပ်ရှက်ခက် လာတယ် ။ အောက်ခြေမှာဆို သူဆီကကြွေကျတဲံ သစ်ရွက်ခြောက်တွေနဲ့……ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာလဲ ပေါင်းမြက်တွေ နွယ်ပင်တွေနဲ့…
အပင်ကြီးကတော့ နဂိုအတိုင်းပါပဲ ပင်စည်ကောင်းကောင်း အရွက်တွေဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ပဲ ..
ဒါပေမယ့် ကြည့်ရတာ မှိုင်းညို့နေတယ် အရွက်တွေကစိမ်းလန်းမှုရှိပေမယ့် လန်းဆန်းမှုမရှိတော့ဘူး ။ ဒါကိုအပင်ကြီးမသိဘူး…။သူစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ သူနေထိုင်နေဆဲပဲ…
လက်ထဲမှာလဲ တံမြက်စည်းတစ်ချောင်းနဲ့….ဘာမှန်းမသိတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ အပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး အရိပ်ထဲ့ကိုဝင်မလို့လုပ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် သစ်ပင်ကြီးက ဟန့်တားလိုက်တာကြောင့် သူရပ်သွားတယ် ။
“ဟိတ် ဘာလုပ်ဖို့ ငါ့အရိပ်ထဲကို ၀င်လာရတာလဲ “
သစ်ပင်ကြီးကမေးတယ် ။ လူငယ်ကသစ်ပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီး ခပ်တည်တည်ပဲ….
“ မင်းကို စိမ်းလန်းစေချင်လို့ပါ “
“ မလိုဘူး…..ငါ့ဘာသာငါ စိမ်းလန်းနေပြီးသားပဲ မင်းငါ့အရိပ်ထဲဝင်စရာမလိုဘူး ”
“ မင်းကို စိမ်းလန်းနေတယ်လို့ ဘယ်သူကပြောလဲ ”
လူငယ်ရဲ့ အမေးစကားကြောင့် သစ်ပင်ကြီး တွေခနဲ ဖြစ်သွားတယ် ဒါပေမယ့် မကျေမနပ်နဲ့ ပဲ…
“ အို………..ဘယ်သူပြောပြော မင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူး………အဓိက က မင်းငါ့အရိပ်ထဲကို မ၀င်ဖို့ပဲ “
ပြောပြီးတစ်ဖက်လှည့်နေတယ့် သစ်ပင်ကြီးကို လူငယ်ကကြည့်ပြီးသက်ပြင်းချတယ်…
“ ကျုပ် ခင်ဗျားဆီ ဘာလို့ရောက်လာတာလဲ ခင်ဗျားသိလား ”
သစ်ပင်ကြီးက ပြန်မဖြေပြန်ဘူး…….ဖြေလို့လည်းမရဘူးလေ သူသိမှမသိတာ သူသိတာသူစည်းမျဉ်းပဲ လူငယ်ကဆက်ပြောတယ် ။
“ တကယ်တော့ခင်ဗျားက ကိုယ်ဆီကိုဘာကြောင့်ရောက်လာမှန်းမသိပဲ တခါးမဖွင့်ပေးချင်တယ့် အိမ်ရှင်ပဲ… ဒီမှာသစ်ပင်ကြီး……”
သစ်ပင်ကြီးတိတ်နေတယ် ဒါပေမယ့် ရှုတည်တည်နဲ့ လှည့်ကြည့်တယ်
“ ကျုပ်ဘယ်လိုရှင်သန်နေလဲ ခင်ဗျားသိလား ”
“ ခင်ဗျားမသိဘူးဆိုတာ ကျုပ်သိပါတယ် ခင်ဗျားက ခင်ဗျားစည်းမျဉ်းနဲ့ ပိတ်မိနေသူတစ်ယောက်ပဲ ကျုပ်ကတော့ ခင်ဗျားဘယ်လိုရှင်သန်နေလဲသိတယ်..ဒါကြောင့် ကျုပ်လာကူညီတာ…”
သစ်ပင်ကြီး နည်းနည်းတော့ အံ့သြသွားတယ်.. ဟုတ်တယ် ဒီလူမျိုးအရင်ကသူမတွေ့ဖူးဘူး အရင်က သူတို့လိုတာပဲတောင်းဆိုကြပြီး မရရင်ပြန်လှည့်ထွက်သွားကြတာ…အခုဒီလူက သူကိုစကားတွေပြောနေတယ်..
“ ကျုပ်ဘယ်သူဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး ကျုပ်ရဲ့အဓိကတာဝန်က ခင်ဗျားကိုစိမ်းလန်းအောင်လုပ်ပေးဖို့ပဲ “
လူငယ်ကပြောပြီးရှေ့ကို ခြေတစ်လှမ်းတိုးလိုက်တယ် ။ သစ်ပင်ကြီးသတိမူမိဘူး ။ လူရွယ်က သူအရိပ်ထဲရောက်လုနေပြီ ။ သစ်ပင်ကြီးက လူငယ်အကြောင်းကိုသိချင်နေတာကြောင့်ပဲ ဒါကိုပဲမဲနေတယ်…..ဒါကြောင့် ဆက်ပြီး…..
“ ဟုတ်ပါပြီ နေပါအုံး ခင်ဗျား ဘယ်ကလာတာလဲ ”
“ ကျုပ်လား ကျုပ်က တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကလာတာ ”
လူရွယ်က ပြောပြီး ခြေတစ်လှမ်း ထပ်လှမ်းတယ်
“ ဘာတိုင်းပြည်လဲ အဲဒီတိုင်းပြည်မှာ ခင်ဗျားလိုလူတွေပဲလား ”
“ အဲဒီမှာ ဘာတွေရှိလဲ “
သစ်ပင်ကြီးက စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ဆဲ…..မပြောရတာကြာနေလို့လားမသိဘူး စိတ်လိုလက်ရရှိနေပုံရတယ်
“ ဘာမှမရှိဘူး ဒါပေမယ့် လွတ်လပ်ခြင်းတွေ ရှိတယ် စည်းမျဉ်းတွေ ယုံကြည်ချက်တွေ မရှိဘူး ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းတွေပဲ ရှိတယ် ”
“ ဒါဆို ခင်ဗျားရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ ခင်ဗျားလိုလူက ဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ..”
“ ကျုပ်ပြောပြီးပါပကော ခင်ဗျားကို စိမ်းလန်းအောင်လုပ်ပေးမို့ပါဆိုနေ “
သစ်ပင်ကြီး ငြိမ်သက်သွားပြန်တယ်..တစ်စုံတစ်ခုကို အသေအချာစဉ်းစားနေသလို….။ လူငယ်ကတော့ အရိပ်ထဲကိုရောက်နေပြီ ။ စကားလည်းပြော အလုပ်လည်းလုပ်ပေါ့ ။ လုပ်တာကမှ အရိပ်ထဲမှာ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ကိုနေတာ ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း တခဏချင်းပဲ အသွင်ပြောင်းသွားတယ် ။ပြောရရင်သစ်ပင်ကြီး နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့…။ စိမ်းစိုလှပလို့…..ပြောက်တိ ပြောက်ကျားကျနေတဲ့ နေရောင်ခြည်အောက်မှာ အရွက်တွေတောင် ၀င်းဝင်းတောက်လာသလိုပဲ…..။ သစ်ပင်ကြီးတော့ ထိုအရာတွေကို လုံးဝကိုသတိမမှုမိတော့ဘူး ။ ကြည့်ရတာသူစည်းမျဉ်းတွေကို သူမေလျော့သွားပုံရတယ်..။ နောက်တော့သတိရလာဟန်နဲ့ စကားစဖို့ကြံတယ် ။ ထိုအချိန်မှာတော့ လူငယ်က ရှင်းလင်းပြီးလို့ လက်စသတ်ပြီး ပြန်ရန်ပြုနေပြီ ။
“ ဒီမှာ………….ခင်ဗျားကိုကျွန်တော် ပြောစရာရှိတယ် ”
လူငယ်ကချွေးသုတ်ရင်း ပြောဆိုတဲ့သဘောနဲ့မေးဆတ်ပြတယ် ။ သစ်ပင်ကချီတုံချတုံဖြစ်နေဟန်နဲ့ စကားကိုခဏရပ်တယ် ။ နောက်မှ….
“ ခင်ဗျား..ကျွန်တော်အရိပ်အောက်မှာ တသက်လုံးနေဖို့ စိတ်ကူး မ ရှိ…..ဘူးလား…ခင်ဗျားတိုင်းပြည်ကို ပြန်ဖို့ မလိုရင်ပေါ့..”
လူငယ်ကသစ်ပင်စကားကြားတော့ မစဉ်းစားပဲ ပြုံးတယ် ။ ဒါကိုသစ်ပင်ကြီးက သူကိုခနဲ့တယ်လို့ ထင်သွားပြီး စကားချက်ချင်းဆိုတယ်
“ ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်က ခင်ဗျားပြောသလို စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ပိတ်မိနေသူပါ ။ ဒါကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ အထီးကျန်ခဲ့ရတယ်….ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါကတော့ ကျွန်တော်…ဆန္ဒ…ပါ “
သစ်ပင်ကြီးက ပြောပြီးငြိမ်သက်သွားပြန်တယ် မ၀ံ့မရဲဖြစ်မှုကြောင့်ထင်ပါတယ် သစ်ရွက်တွေ တုန်ခါနေတယ် ။ လူငယ်ကာ သူကိုပြုံးပြီးကြည့်နေဆဲ…
တော်တော်ကြီး ကြာကြာကြီးကြည့်ပြီးမှ လူငယ်စကားသံထွက်လာတယ် ။
“ ဒီမှာသစ်ပင်ကြီး ”
သစ်ပင်ကြီးက လူငယ်ဆီကတစ်စုံတစ်ခုကို စောင့်မျှော်နေပုံနဲ့ မော့ကြည့်တယ်
“ လောကမှာ ကျုပ်လိုလူမျိုး ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမယ်ထင်လဲ ”
သစ်ပင်ကြီးခေါင်းခါတယ် လေတိုက်တာနဲ့ရောပြီး သစ်ရွက်တွေအများအပြားကြွေသွားတယ် ။ လူငယ်ကဆက်ပြီး…..
“ တကယ်တော့ ကျုပ်လဲမသိပါဘူး..”
“ ဒါကြောင့် ကိုယ်မသိနိုင်တဲ့အရာတခုကို ဘာကြောင့်ဖြစ်မလာရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ တားဆီးထားရတာလဲ ”
“ ခင်ဗျားဆီကို တကယ်လာချင်တဲ့ သူတွေ ခင်ဗျားအရိပ်မှာ တကယ်ခိုလှုံချင်တဲ့သူတွေ ပျော်ရွှင်စွာဆော့ကစားချင်တဲ့သူတွေ ခင်ဗျားကိုပျော်ရွှင်မှုပေးချင်တဲ့သူတွေ တကယ်ရှိချင်လဲရှိနေနိုင်မှာပေါ့… ဒါကိုခင်ဗျားမှမသိနိုင်ပဲ ”
လူငယ်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းကို သစ်ပင်ကြီးက တစ်နေရာရာကိုကြည့်ကာ လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီး ခေါင်းငြိမ့်တယ် ။ လူငယ်ရဲ့အပြုံးက ပိုပြီးအသက်ဝင်လာတယ်…….ခဏကြာသည်အထိ
“ ဒါဆိုအခုကျွန်တော် ဘာလုပ်သင့်လဲ “
သစ်ပင်ကြီးကခေါင်းထောင်ကာ ထမေးတယ် ။ လူငယ်ကမဖြေတော့ပဲ သစ်ပင်ကြီးရဲ့အရိပ်အောက်ကနေ တစ်လှမ်းခြင်းထွက်ခွာလိုက်တယ် ။ မျက်နှာပေါ်က အပြုံးတစ်ဝက်နဲ့ ဖြေဖြေးချင်း…..
“ ဟေ့လူ …”
တကယ်တော့ သစ်ပင်ကြီးက လူငယ်ဘာကိုဆိုလိုမှန်း နားလည်လိုက်ပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် သူသိချင်တာတခုကြောင့် ခေါ်နေသေးတယ်
“ ဟေ့လူ ဟေ့လူ ”
လိုက်သွားလို့မရတာကြောင့် တစ်ဖြေးဖြေးဝေးသွားတော့မယ်ဆိုတာ သစ်ပင်ကြီးသိနေတယ်
“ ဟေ့လူ..ခင်ဗျား…ခင်ဗျားနာမည်လေးပြောခဲ့ပါ ……ဟေ့လူ ”
လူငယ်ကကြားရသလို လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ ကြားရသလောက်အသံနဲ့ လှမ်းပြောတယ် ။ တိုးသလား ကျယ်သလား သစ်ပင်မသိ ။ သစ်ပင်ကြီး ပြတ်ပြတ်သားသားကြားလိုက်ရတယ် ………….
ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့ သစ်ပင်ကြီးအောက်၌ ဘာမှမထူးဆန်းတော့သလို လူတွေနဲ့ စည်ကားလာတယ် ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရင်ဖွင့်ပြီးစီစစ်စောင့်မျှော်နေတယ့် သစ်ပင်ကြီးရဲ့ အဖြစ်ကလဲ မထူးဆန်း ။ ထူးဆန်းသည်က သစ်ပင်ကြီးက ဘယ်သူမှမကြားအောင် တစ်စုံတစ်ခုကို ရွတ်ဆိုနေတယ် ။ တကယ်တီးတိုးဆိုမှ တီးတိုးလေး…
သေချာနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီကစကားနှင့် ဆင်တူနေတယ်
တကယ်လို့ သင်သည် ဒီလိုသစ်ပင်မဟုတ်ခဲ့လျှင်လည်း သင့်ထံသို့ ပုံပြင် ရောက်လာပါလိမ့်မည် ။
နေကောင်းကင်နီ( ပုံပြင် )
ချခင်းသူ Free Time Admin at 9:27 AM